ပီတိ: April 2008
ငယ်တုန်းက နုခဲ့သော ငါစွဲ
Posted by P.Ti at Wednesday, April 30, 20083comments
Posted by P.Ti at Tuesday, April 29, 20082comments
အမြင်မရှင်း စိတ်ရှုပ်ထွေး လိမ့်မယ်၊
ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက်တော့ ရှိဖို့ လိုမယ်နော်…
နောင်တရစရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ လုပ်မိမယ်၊
သင်ခန်းစာတော့ ယူတတ်ဖို့ လိုမယ်နော်…
လူတွေအမြင်စောင်း ဘေးတိုက်တာတွေ ခံရလိမ့်မယ်၊
Posted by P.Ti at Monday, April 28, 20080comments
Posted by P.Ti at Saturday, April 26, 20082comments
ချစ်တတ်တဲ့ အသည်း နဲ့
ရလိုက်တာက အမုန်း ဆိုတော့လည်း
Posted by P.Ti at Monday, April 21, 20080comments
လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်၊ ၁၉၉၆ ခု ဧပြီလ ၁၆ ရက် မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက် နေ့ မနက် ၇း၄၀ မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ခြေလျင်နှင့်တောင်တက်အသင်း မှ အသင်းဝင် ၈၁ ဦး ချင်းပြည်နယ် ၀ိတိုရိယတောင်ထိပ် (၁၀၅၀၀´) ကို အောင်မြင်စွာတက်ရောက်ခဲ့တာကို သတိရစွာဖြင့်….
ခရီးစဉ်ကို အတူသွားခဲ့ကြပြီး ပြောမနာဆိုမနာ ရဲဘော်ရဲဘက် သူငယ်ချင်းများကိုလည်း သတိရလျက်ပါ။
အားလုံး နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
(ပထမ စိတ်ကူးတာကတော့ ၄/၉၆ ကို ဆက်လက်ရေးပြီး နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ တောင်ထိပ်အရောက်ရေးဖို့ပါပဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြီးလို့ အခုလို အမှတ်တရစာလေးပဲရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။)
Posted by P.Ti at Thursday, April 17, 20083comments
Posted by P.Ti at Wednesday, April 16, 20084comments
ပြီးခဲ့တဲ့လက လက်ဆောင်အကြောင်း စိတ်ကူးပေါက်ပြီးရေးလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အမတယောက်က ကျွန်တော့်အတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ Liverpool FC အင်္ကျီကိုဝယ်ပြီးပြီလို့ အကြောင်းကြားပြီအချိန် ပြီးတော့ ဒီဘလော့ကိုလည်း ဖတ်မိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ သူ့လက်ဆောင်အကြောင်းမပါသေးလို့ ပြောလာပါတယ်။ ရေးချင်ရက်လက်တို့ ဖြစ်သွားတယ်။ အဟဲ… ဒီပို့စ်မှာတော့ နဲနဲကြွားတာလေး ပါသွားတာကို သည်းခံပါနော်။
အကို နဲ့ ပတ်သက်လို့ အမတော်ပေမယ့် အကို နဲ့ အမ သမီးရည်းစား မဖြစ်ခင် သူငယ်ချင်းဘ၀ လွန်ခဲ့သော ၁၃-၁၄ နှစ်လောက်ကတည်းက သိခဲ့ပြီး အမအရင်းလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သူက နိုင်ငံခြားခရီးတခုကိုသွားတော့ ဘာဝယ်ခဲ့ပေးရမလဲလို့ မေးလာခဲ့ပါတယ်။ ရပါတယ် လို့ ပြောမထွက်တဲ့ ကျွန်တော်က Liverpool FC အင်္ကျီကိုဝယ်ပေးဖို့မှာလိုက်ပါတယ်။ အမကလည်း လိုလိုလားလားပင် ၀ယ်ပေးပြီး ပို့လိုက်ပါတယ်။ Liverpool ဘောလုံးအသင်းကို အားပေးနေပေမယ့် ဒီအင်္ကျီဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်သော အသင်းရဲ့ merchandise ပစ္စည်းပါပဲ။ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အမကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။
အဲ နောက်လက်ဆောင် တခုကို ဒီရက်အတွင်းမှာပဲ ထပ်ပြီးရခဲ့ပါသေးတယ်။ ထပ်ပြီးကြွားရဦးမှာပေါ့။ အဲဒီလက်ဆောင်ကိုတော့ အရမ်းခင်တဲ့ တယောက်ဆီကပေါ့။ သူက အရင်ရေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင် ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး စာအုပ်လက်ဆောင်ရရင် ပျော်တယ်ဆိုလို့ ဖတ်ရအောင် စာအုပ်လက်ဆောင် ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်သည်းဖို စာရေးဆရာ The Da Vinci Code ကိုရေးတဲ့ Dan Brown ရဲ့ ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Angels & Demons စာအုပ်ပေါ့။ စာအုပ်နဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Bookmark လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ စာအုပ်ရောက်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ချင်တာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ နေဖို့ရာအိမ်ရှာနေတာနဲ့ ရှုပ်နေပါတယ်။ အခုတော့ နေဖို့အိမ်လည်းရပြီမို့ အားချိန်များရရင် စာအုပ်ဖတ်တဲ့ဆီ ခြေဦးလှည့်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
အရမ်းခင်တဲ့ သူကလည်း စာအုပ်ကို ချစ်စရာပုံလေးဆွဲပြီးတော့ပေးတော့ ပိုပြီး ကြည်နှုးစရာလေးပေါ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုတလော အိမ်ကလည်း လူကြုံလို့ဆို မေမေက စာအုပ် နဲ့ စားစရာတွေ ပို့ထားပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်တခုကျန်သေးတယ်။ ပြည်ပခရီးကပြန်ရောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က လက်ဆောင်အဖြစ် အင်္ကျီယူမလား အိတ်ယူမလား ဆိုပဲ။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်က ရပါတယ် (ကိုAndy ရေးထားသလို) မပြောပါဘူး။ သေချာသွားကြည့်ပြီးမှ ကြိုက်တာကို ယူဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ စိတ်ချပါ အဲဒီလက်ဆောင်ကိုတော့ ထပ်ပြီး မကြွားတော့ပါဘူးနော်။ :P
Posted by P.Ti at Thursday, April 10, 20080comments
ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့ ဘဘလှ နဲ့ အမေမာရဲ့
နွေကျောင်းပိတ် အပေါ်ထပ်က စာအုပ်စင်နားမှာ
ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ဇနီးမောင်နှံအတွက်
အမှတ်တရ လက်မှတ်ပါတဲ့ စာအုပ်တိုင်းဟာ
သားတို့ အတွက် အလိမ္မာတွေ တိုးခဲ့ပါတယ် အမေ။
ကျွန်တော် နဲ့စတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ
အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိနေပြီပေါ့ အမေ။
တခါတလေ မီးပူတိုက်တဲ့ အကို ကိုတွေ့တော့
ငါ့သားကြီးက သိတတ်လိမ္မာတယ် ပြောခဲ့တာကို
ပြောခဲ့တာ လည်း သတိရမိတယ် အမေ။
မန္တလေးကို မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပေမယ့်
နိုင်ငံကို အင်မတန်ချစ်ပြီး တိုးတက်နေတာကို မြင်ချင်တဲ့
နောက်ဆုံးအချိန်အထိ မပြောင်းလဲပဲ ပြည်သူ့အတွက်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့
တနိုင်ငံလုံးက အမေ လို့ ချစ်မြတ်နိုးစွာခေါ်တဲ့
တိုင်းပြည်အတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေလိုလလို ထွန်းတောက်ပေးခဲ့တဲ့ အမေမာ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
Posted by P.Ti at Monday, April 07, 20080comments
Posted by P.Ti at Thursday, April 03, 20082comments
ကျွန်တော် ဒီဘလော့ကိုရေးတာ တနှစ်တောင် မပြည့်သေးပါဘူး။ စရေးပြီးတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်တွေတို့ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ဆက်ပြီးရေးဖြစ်တယ်။ ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်၊ အမှတ်တရလည်းရေးဖြစ်တဲ့ နေရာလေးမို့ တကယ်ပဲ သံယောဇဉ်ရှိပါတယ်။ ဒီလို ဘလော့မှာ စာရေးဖြစ်လို့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တာကတော့ မိတ်ဆွေကောင်းများစွာရလိုက်တာပါပဲ။
အခုတော့ စိတ်ထဲမှာ ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ ခံစားချက်က ပြင်းထန်လာတော့ မဖြစ်မနေ ဒီနေရာလေးကို စွန့်ခွာဖို့ တွန်းအားတွေရှိလာတယ်။
ဘယ်လိုမှ တွေးမထားမိတာတွေ လုပ်ရတော့မယ်။
မိတ်ဆွေအားလုံး ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ကျွန်တော်က အေပရယ်ဖူးလုပ်တာ အကျင့်ပါနေလို့။ ဟီး….
၁၀ နာရီလောက် စွန့်ခွာရမှာပြောနေတာနော်… :P
Posted by P.Ti at Tuesday, April 01, 2008 1 comments